Mmepụta nke echiche | Martech Zone
Ruo ọtụtụ narị afọ, nkọwa nke arụpụta chọrọ na e nwere n'ichepụta usoro na-ewere ngwaahịa site na akụrụngwa gaa ngwaahịa maka ahịa. A tụrụ akụ na tọn na eserese na ngwa ahịa. Kslọ akụ gbaziri ego dabere na ole akụ na i nwere. Usoro mmuta anyi kwadebere ndi ntorobia anyi ka ha gosiputa n’oge, ha abiara n’ oru, ma ndi oru kewara… acha anụnụ anụnụ wee mee ka aka ha ruru unyi ma lekota ocha.
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-akwa arịrị na anyị efuela ọrụ nrụpụta… na ha agaala mba ofesi gaa mpaghara nwere ọnụ ala na enweghị ọnụ ahịa. Ha niile na-agbasi mbọ ike ịkpọlata ha. Nyeghachitere ha onye? Ourmụ anyị nwere nnukwu ụgwọ mgbe ha kwadochara agụmakwụkwọ kacha mma na mbara ụwa. Ha na-agụsị akwụkwọ ozugbo na enweghị ọrụ. Ulo oru anaghị ego ego… ha ka na-ewepụ ndị mmadụ.
Nrụpụta nke ngwaahịa anaghị alaghachi. Ọbụlagodi na eziokwu ahụ bụ eziokwu, ụlọ akụ anyị, ndị ndu anyị, yana sistemụ anyị ka na-ekpe ikpe na-aga nke ọma dabere na ọtụtụ wijetị ha nyefere na mkpa maka wijetị ndị ahụ. Ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ akara nke koodu, arụpụta ka na-adabere na ngwaahịa. Mana imepụta ngwaahịa abụghịzi ihe anyị dị mma na ya, anyị enweghị ike ịme ya n'ụzọ bara ụba nyere akụnụba nke mba anyị.
N'otu oge, na ọbịbịa nke mgbasa ozi dijitalụ, anyị na-agba àmà ahịa ọhụrụ. Ahịa nke echiche. Mgbakọ ọnụ na njikọta emeela okporo ụzọ awara awara maka ịkwaga echiche ndị ahụ. Na DK New Media, anyị nwere ndị ahịa ruo Switzerland, ndị na-emepụta ihe na Romania, ndị nyocha na India, anyị na-arụkwa echiche Ebe a na United States. Anyị mepụtara a pụrụ iche na-emepụta ụzọ nke auditing, mmejuputa atumatu na iji ọtụtụ inbound ịga nke ọma na ndị ahịa anyị.
Anyị na-echekarị echiche echiche dị ka otu nzọụkwụ na-eduga na ngwaahịa. Nke ahụ adịghị mkpa ịbụ ikpe ma ọlị. Echiche nwere ike be ngwaahịa. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere ọtụtụ ndị ahịa anyị, na-etinye ego na echiche anyị. Chọpụta, e nwere bụ mgbe a tangible anapụta na-abịa na ndị… audits, infographics, analysis, blog posts. Ma ọtụtụ oge, ọ bụ naanị echiche. Mgbe anyị nwere ike iburu echiche ahụ ma gbanwee ya ka ọ bụrụ onye ahịa, nke ahụ bụ nsonaazụ azụmaahịa nke bara uru itinye ego ahụ.
Anyị mmepụta akara na-juru n'ọnụ, na ina na-eto eto. N'ezie, nsogbu bụ na sistemụ ahụ anaghị amata ihe achọrọ ma ọ bụ ngwaahịa. Usoro a ka na-akpọ nke a ọrụ. Usoro a kwenyere na ọ bụrụ na m chọrọ ịzụlite azụmahịa m, na naanị ụzọ m ga-esi mee ya bụ ime ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ m mụbaa. Enweghị mgbazinye ego maka n'ichepụta ihe echiche, ọ dịghị ulo oru mbo ụlọ ọrụ maka n'ichepụta echiche, na enweghi mmata na nsonaazụ ndị ahụ echiche.
Nke a abụghị mkpesa, nke a bụ nyocha na oku ịme ihe. Ihe niile anyị na-etinye na afọ ndị a niile na Silicon Valley na Mahadum ọ bụla iji kwadebe anyị maka oge a… anyị na-afụ ya. Anyị ji agụmakwụkwọ kacha mma akwakọba ụbụrụ ụmụ anyị mana ha enweghị mmụọ nsọ na akụnụba iji were echiche ha soro ha rụọ ọrụ.
Enweghị oge ka mma iji mee nke a. Anyị nwere akụ na ụba ụwa ebe anyị nwere ike imepụta echiche anyị na arụmọrụ dị egwu… na-achịkọta akụ sitere n'akụkụ ụwa niile, jiri ọtụtụ ngwaọrụ enweghị ọnụ na ọnụ ala site na ịntanetị iji wuo anyị. mmepụta akara, ma nyefee echiche anyị ịre n'ahịa… ọ bụghị n'ọnwa ma ọ bụ n'afọ… kama na elekere na ụbọchị.
Ọtụtụ ndị ga-ama ndị mmadụ ikpe na-eche na, ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 40 enweghị ọrụ, nke a bụ oge kachasị njọ offshore ọrụ. Ọ bụghị oge kacha njọ, ọ bụ oge kacha mma. Ọ bụrụ n ’ị ga-ewere echiche gị, mepee ya, ma wepụta ya site n’ịpụrụ n’akụkụ mmiri, ị nwere ike nweta ya n’ahịa ma ree ya ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala. Ọ bụrụ n’inwere ike ire ya, ị nwere ike tinyezi ego ha n’ọrụ ma wulite azụmaahịa gị. Ọganihu ahụ bụ ihe nyeere anyị aka ịkpọ ndị otu egwuregwu niile na Indianapolis.
N'ime izu ole na ole, anyị ga-ebi na sistemụ ọdịnaya nke ga - enyere anyị aka ijikọ ndị ahịa anyị niile n'ihe karịrị otu narị na iri isii n'ụwa niile. Ndị otu anyị ga-ewulite arụmọrụ ahụ, kpọkọta ndị otu, curate, ma bipụta ọdịnaya nke mepụtara site na ya. Nsonaazụ nsonaazụ bụ ngwaahịa kachasị dị elu ewuru ngwa ngwa na ịkwụ ụgwọ. Anyị na-ewu ụlọ ọrụ anyị!
Oge eruola mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ike ego na ike azụmaahịa ịmata ohere ndị anyị nwere n'ihu anyị. Oge eruola mgbe usoro agụmakwụkwọ anyị ga - akpali ma kuziere ụmụakwụkwọ anyị - ọ bụghị naanị otu ha ga - esi chee echiche, kama otu ha ga - esi weta echiche ha n'ahịa. Ebe ahịa maka echiche enweghị oke, ọ bụ ahịa kasịnụ enwere.
Anyị kwesịrị ịga n'ihu na-akwalite ngwaọrụ maka ahịa a, na-eji oke ozi dị elu nke dị na ebe ndị ọzọ na-elekọta mmadụ, mmekorita, arụmọrụ na ngwa ọrụ otu egwuregwu zuru ụwa ọnụ. Anyị kwesịrị ịgba ume na gbaa ndị echiche ahia. Anyị kwesịrị itinye ego na ahịa echiche. Enweghị oge dị mma karịa ugbu a karịa ịbanye na ụlọ ọrụ n'ichepụta… n'ichepụta echiche.